FARSAMADA ISBEDELKA waa shirkad tiknoolajiyad sare ku leh magaalada Shanghai, oo ka gudubtay nidaamka shahaadaynta tayada / ISO / TS16949. Warshadu waxay daboolaysaa aag 8000 mitir murabac ah, oo ay ka shaqeeyaan in ka badan 200 oo shaqaale ah, dakhliga sanadlaha ahna waa ku dhowaad 400 milyan oo RMB.
SHANGHAI CORBITION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, oo la aasaasay 2020, oo diiradda saareysa qalabka iyo soo saarista qalabka, waa shirkad ganacsi oo madax-bannaan oo hoos timaadda teknoolojiyadda Changheng.
Waxay leedahay in ka badan 30 shati oo loogu talagalay hal-abuurka iyo moodeelka korantada, oo ay ku jiraan in ka badan 10 shatiyada alaabada qalabka caafimaadka
Sanadihii la soo dhaafay, waxay horey u siisay in ka badan 100 xalka nidaamka nidaamka naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka iyo kuwa kale macaamiisha warshadaha gudaha iyo shisheeyaha.
Shirkaddu waxay leedahay tiro ka mid ah macaamiisha caanka ah ee caanka ah adduunka sida: ZYbio, Sansure Biotech, Daan-gene, Shanghai PHARMA iyo wixii la mid ah
Sannadkii 2019, waxay la shaqeysay shaqaalaha BGI si ay uga caawiyaan Morocco dagaalka lagula jiro COVID. Sanado badan oo dadaal ah, shirkaddu waxay kasbatay kalsoonida iyo ammaanta macaamiisha.
Wax soo saarka waaweyn
Iyada oo tiknoolajiyada ogaanshaha ogaanshaha molikalka ee asaasiga ah, CORBITION waa ganacsi tikniyoolajiyad caafimaad oo siineysa xalal badan oo isku dhafan qalabka soo saarista aaladda nucleic acid, qalabka wax lagu kala iibsado ee loo yaqaan 'PCR fluorescence quantitative', qalabka wax lagu baaro ee la qaadi karo, reagentyada ogaanshaha cudurka, alaabada la isticmaalo.
Wax soo saarka caafimaadka waa la soo saaray, la tijaabiyay oo lagu duubay aqoon isweydaarsiyo nadiif ah oo aan boor lahayn.
Shirkaddu waxay ku taal Dongjing Industrial Park, aagga aasaasiga ah ee G60 Kechuang Corridor, Degmada Songjiang, Shanghai, oo u dhow Saldhigga Dongjing ee Metro Line 9.
Qalabka caafimaadka ayaa ka gudbay shahaadada baaritaanka amniga caalamiga ah iyo tan gudaha iyo shahaadada CE, liscense ka hortagga ayaa ku dhejiyay reacord ee Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka. Shirkaddu sidoo kale waxay dhaaftay nidaamka maaraynta tayada caafimaadka ee ISO13845.
Dhaqanka asaasiga ah
Dad u janjeedha, hal-abuurnimo cilmiyeed iyo farsamo.
Daryeelka caafimaadka, horumarka waara.